Chandelier iyo Light Pendant
Iftiinka casriga ee casriga ah
Nalalka caadiga ah
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka nalka iyo nalalka saqafka
Nidaamka qurxinta guriga, xulashada nalku waa xiriir aad u muhiim ah. Suuqa qurxinta maanta, laydhka caadiga ah waxaa loo qaybin karaa laba nooc: shumacyo iyo laambadaha saqafka. Labadan nooc ee laydhku waxay leeyihiin astaamo u gaar ah, taas oo waliba dad badan dareensiisa e ...
Sida loo doorto muraayad
Chandeliers waxaa badanaa lagu isticmaalaa qolka fadhiga, qolka cuntada ama qolka jiifka ee guriga. Kalluumeysatadu waa waxyaabo aad u qurux badan, laakiin waa maxay noocyada wax lagu qurxiyo ee jira? Sidee loo doortaa muraayad? Sidee loo rakibaa muraayadda? Marka xigta, ii sheeg wixii ku saabsan. 01 Noocyada wax lagu shaandheeyo ee birqaabyada ka buuxa nautic ...
Waa maxay cabirka laambadda gidaarka ee lagu rakibay madaxa sariir 2 mitir ah?
1. Nalka sariirta dhinaceeda waa inuu ka hooseeyaa 1.5 ilaa 1.8m oo dhulka ka hooseysa. Haddii nalka gidaarka ee nalka derbiga u eg uu soo baxo, masaafada u dhexeysa gidaarka iyo nalka derbiga sariirta derbiga waa inuu ahaadaa 10cm ilaa 40cm. Haddii sariirta dhererkeedu yahay 45 cm, oo lagu daro dhererka caadiga ah ee joodarigu wuu soo noqon karaa ...
Sida loogu qurxiyo guri marinka Meesha banaan ayaa fadhida, laambadaha lama xusho, shan nooc oo iswaafajinaya ayaa diiran oo dhalaalaya
Haddii marinku aanu lahayn iftiin ku filan, boosku wuu muuqan doonaa. Haddii arrimuhu sidan ku sii socdaan, waxay dadka siin doontaa dareen niyad jab iyo cabsi ah. Ka dib sidee loogu qurxiyaa guri marin? Isagoo wajahaya marinka iftiinka iftiinka ah, shan nooc oo qalabka nalalka ah ayaa lagula talinayaa inay ka dhigaan spa ...
Liiska alaabada shan qol oo fadhiga ah, midkee ayaad u maleyneysaa inuu ugu fiican yahay gurigaaga
Qolka fadhiga waa qeyb aad muhiim ugu ah qaabeynta qoyska. Waa goob loogu talo galay qoyska in lagu raaxeysto oo lagu madadaalo, sidoo kale waa goobta ugu weyn ee lagu madadaaliyo martida. Qurxinta fiicani waxay ku reebi kartaa raad aad u wanaagsan martida, oo waxay dadka ka dhigtaa inay ku amaanaan, iyagoo u maleynaya haddii aad leedahay ...
Ma loo baahan yahay in la iibsado laambad dabaq ah? Weli waxaad weydiineysaa su'aashan
Saaxiibbo badan ayaa laga yaabaa inay wax ka bartaan nalalka dabaqa ah ee TV-ga, kaas oo inta badan lagu arki jiray qoysaska hodanka ah ee 60s iyo 70s. Si kastaba ha noqotee, laambadaha dhulka ee casriga ahi badanaa waxay ka kooban yihiin qaansooyin, laambadaha laydhka iyo ilaha iftiinka, waxay fadhiistaan ​​meel oo way dhacsan yihiin, sidaa darteed dad badani ma dooran doonaan. Haddii aad akhriso maqaalkan, ...
Waxaa jira farqi udhaxeeya shaashadda iyo malaha, isbedelka runtii aad ayuu ufiicanyahay!
Waqtiyadu way soo socdaan, laambadihii iyo laambadihii ayaa iyaguna si kala duwan u soo baxaya. In kasta oo shandaduhu ay tahay qaab caadi ah, oo ay ku sii badanayaan dhiirrigelinta naqshadeynta, naqshadeynta laambad weyn ma aysan noqonin tan guud ee qurxinta! Maanta, aan ka hadalno farqiga u dhexeeya nalka iyo c ...
Ma garanaysid laambadda dhulka la dooranayo? Waxaad u dooran kartaa sidan
Iyada oo la soo saaray alaab guri oo fudud, noocyada iyo qaababka laambadaha dhulka ayaa aad iyo aad u kala jaad ah, shaqooyinkoodana sidoo kale waxaa soo maray tabo cusub. Marka la eego naqshadeynta, laambadda dabaqa waxaa iska leh qaabka Nordic, oo leh naqshad yar oo naqshadaysan iyo qaab qalooca; ...
Sidee ayaa nalalka caadiga ah loo qaabeeyey?
Nalalka qurxinta waxay leeyihiin heer aad u sarreeya oo xorriyad ah xagga nashqadeynta. Si ka duwan nalalka ganacsiga, ee leh ugaarsiga farsamo ee ugu dambeeya ee tayada indhaha, naqshadeynta nalalka qurxinta waxay xoogga saareysaa oo kaliya quruxda qaabka laambadda, laakiin sidoo kale jawiga saameynta iftiinka. Codsi kala duwan ...
No.4 3aad Fuqing Rd, Henglan Town, Zhongshan City, China